डा. सुनिल शर्माद्वारा बिपन्न परिवारकी बालिकाको निःशुल्क उपचार - Sainokhabar
होमपेज / समाचार / डा. सुनिल शर्माद्वारा बिपन्न परिवारकी बालिकाको निःशुल्क उपचार
डा. सुनिल शर्माद्वारा बिपन्न परिवारकी बालिकाको निःशुल्क उपचार
बिराटनगर / नोबेल शिक्षण अस्पतालका सञ्चालक डा.सुनिल शर्माले आर्थिक अभावका कारण उपचार नपाएर बसेकी एक बालिकालाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइदिएका छन् । डा.शर्माले मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिका–६ कालिदहकी ७ बर्षीया रुस्मा बस्नेतको निधारमा पलाएको ट्यूमरको शल्यक्रियासहितको सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क गराईदिएका हुन् ।
बिपन्न परिवारकी ती बालिकाको परिवारले खर्च जुटाउँन नसक्दा उनको उपचार हुँन सकेको थिएन । जन्मिएको करिब एक महिनादेखिनै निधारमा निस्किएको डल्लो बढ्दै जाँदा उनलाई आँखा हेर्नसमेत समस्या हुँने गरेको थियो । तरपनि, पैसा अभावमा उनको उपचार हुँन सकेको थिएन ।
नेपाली काँग्रेसका मोरङ जिल्ला सभापति डिगबहादुर लिम्बूमार्फत विरामीको अवस्था थाहा पाएपछि डा.शर्मा उनको घरमै पुगेका थिए । उनले विरामीको पारिवारिक अवस्था बुझेर नोबेल अस्पतालमा ल्याई बालिकाको निःशुल्क औषधि उपचारको व्यवस्था मिलाईदिएका हुन् । डा.शर्माले करिब दुई लाख मूल्य बराबरको औषधि उपचार निःशुल्क गराईदिएका छन् ।
पैसा अभावले उपचार गर्न नसकिरहेको अवस्थामा डा.शर्माले सम्पूर्ण खर्च ब्यहोरेर निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाईदिएपछि अहिले बालिकाको परिवार हर्षित छ । ‘पैसा अभावले छोरीको उपचार गर्न सकिरहेका थिएनौं ।’ बालिकाका बुबा विकासले भने–‘सुनिल सरले सबै खर्च निःशुल्क गरेर उपचारको व्यवस्था मिलाईदिदा ढुंगा खोज्दा देउता मिलेजस्तो भयो ।’